NEFELI 50meters ukusuka elunxwemeni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarios
Ifakwe kumgangatho wokuqala inika le ndawo imbonakalo entle kakhulu yolwandle olukufutshane (50m kude) kunye nendawo ejikelezileyo. Inika ubumfihlo njengoko ikude ngokwaneleyo ukusuka edolophini ngoko akukho traffic endleleni, kodwa ivale ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukuya naphi na apho uthanda khona (ikhefi, i-taverna, imarike) ngemizuzu emi-5 yokuhamba umgama. Le ndawo yeyona ndawo ifanelekileyo yosapho okanye abahlobo ukuba babe neholide yokuphumla ngelixa besonwabela indawo yendawo ngokupheleleyo.
Amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini wokuhlamba iimpahla zakho kunye ne-terrance enombono ogqibeleleyo wendawo ejikelezileyo kunye nolwandle.
Ipropathi ibekwe kwindawo ethe ngqo ecaleni kolwandle kwaye iilwandle zekissamos zilapha ecaleni kwakho. Iivenkile zalapha ekhaya, iicafe kunye neetavernas zikufutshane kakhulu kuwe kwaye kukho iivenkile ezinkulu ezimbalwa ezikufutshane ukuba uswele nantoni na.
Umbuki zindwendwe ngu- Marios
Siya kukwamkela kwaye siya kuba nakho (ngefowuni okanye i-imeyile) ngexesha lokuhlala kwakho apho ngayo nantoni na onokuyidinga, ngelixa ungaphazamisi ubumfihlo bakho. Sikwabonelela ngotshintsho lwelinen kunye neetawuli amaxesha angama-2 ngeveki simahla ukuze ukwandise ukuphumla kwakho.
Siya kukwamkela kwaye siya kuba nakho (ngefowuni okanye i-imeyile) ngexesha lokuhlala kwakho apho ngayo nantoni na onokuyidinga, ngelixa ungaphazamisi ubumfihlo bakho. Sikwabonelel…
Inombolo yomthetho: 00000229110
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kissamos